Hogamiye Deni oo Magacaabay Guddiga qaban-qaabada 22-sano…
Madaxweyne Deni Oo Ciidamada Ammaanka Faray Dhaqangelinta…
Hogamiyaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay 8-xubnood oo u badan Wasiiradiisa oo diyaarinaya munaasabadda lagu maamuusayo 22-sano guuradkii kasoo wareegtay aas-aaska Dowlad Goboleedkaas.
Shaqada ugu weyn oo ay qabanayaan waa in ay agaasimaan xafladda xuska 1-da Agoosto, diyaarinta dadka la casuumayo, meesha lagu qabanayo, qaabka loo dhigayo iyo goobaha uu Hogamiyaha tagayo.
Hogamiye Deni ayaa xubnaha guddiga ka dalbaday in ay guda galaan waajibaadka horyaalla, maadaama 12-Cishe ay heystaan, lagana doonayo in ay agaasimaan munaasabad heerkeedu sareeyo.
Xubnaha Guddiga ayaa kala ah:
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka, Dalxiiska iyo Isgaarsiinta Cabdullaahi Cali Xirsi (Guddoomiye)
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Harumarinta Qoyska Aamina Cismaan X Jaamac (Xubin)
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Maxamed Xasan Ciise (Xubin)
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyada Maxamed Cabdulqadir Cusmaan (Xubin)
Wasiir Ku-xigeenka Wasaarada Arimaha Gudaha iyo Federalaynta Maxamed Musadaq Maxamed (Xubin)
Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Gen. Yaasiin Cumar Yuusuf (Xubin)
Taliyaha Ciidanka Booliska Gen. Cabdi Xasan Xuseen (Xubin)
Agaasime ku-xigeenka Guud ee Madaxtooyada, Cabdiweli Cali Cabdulle (Xubin).
Sanad waliba Dowlad Goboleedka Puntland waxa ay maamuustaa 1-da Agoosto oo ku beegan kolkii la dhisay Dowlad Goboleedkaas, xili dalka uu ka socday dagaaladii sokeeyay, kadib markii dowladdii Militariga ahayd ee dalka waqti dheer maamuleysay la riday.
Aas-aaska Dowlad Goboleedka Puntland waxaa uu dagaal ku dhexmaray xubno kasoo jeeda deegaanadaas oo isku qabtay hoggaaminta maamulka Puntland, balse markii dambe axdiyo heshiisyo ah ayay ku gaareen in 4-tii sanaba mar doorasho la qabto.